Kutaura Zvinobaya Mwoyo | Kuverenga Nekudzidzisa
Kutaura Zvinobaya Mwoyo
PFUPISO YECHIDZIDZO: Batsira vateereri kuti vaone kukosha kwezvavanenge vadzidza uye kuti vazvishandise.
Batsira vateereri kuti vazviongorore. Bvunza mibvunzo isingadi mhinduro kuti ubatsire vateereri kuti vazviongorore.
Batsira vateereri kuti vaite zvinhu nechinangwa chakanaka. Kurudzira vateereri kuti vaongorore kuti nei vachiita mabasa akanaka. Vabatsire kuti vave nechinangwa chakanakisisa chekuita zvinhu; ngavaite zvinhu nekuti vanoda Jehovha, nevanhu, nezvinodzidziswa neBhaibheri. Vabatsire kuti vafunge, pane kungovaudza zvekuita. Usavanyadzise, asi ita kuti vasare vakurudzirwa, vava kuda kuita zvese zvavanogona.
Ita kuti vafunge nezvaJehovha. Varatidze kuti mirayiro yaMwari nezvimwe zvinodzidziswa neBhaibheri, zvinotiratidza sei zvakaita Mwari uye kutida kwaanoita. Batsira vateereri vako kuti vafunge kuti Jehovha anonzwa sei nezvavanoita uye kuti vade kumufadza.
Yeuka kuti Jehovha ndiye anoita kuti vanhu vauye kwaari. Kurudzira vanhu neShoko rake.
Kana zvichiita, bvunza mibvunzo kuti uzive zvinonyatsotendwa nemunhu waunenge uchitaura naye. Tarisa chiso chake uye teerera inzwi rake kuti uzive kuti ari kunzwa sei. Asi iva nemwoyo murefu. Pamwe ungatofanira kutanga waita kuti muteereri wako avimbe newe kuti azokuudza zviri pamwoyo pake.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kutaura Zvinobaya Mwoyo
Kuverenga Nekudzidzisa—Kutaura Zvinobaya Mwoyo
th chidzidzo 19 p. 22